Adii Waaqoo Yuunversiitii Waldiyaatti reebamee ajjeefame!! Kichuu
[ February 20, 2020 ] We need to come together — but not inside Prosperity Party’s straitjacket	Africa
[ February 20, 2020 ] #Ethiopia, #Genocide, PM Abiy Ahmed Ali Government	Videos
[ February 20, 2020 ] Ethiopia’s ruling party Bilxiginnaa is threatening civil servants with administrative punishments if they fail to attend a rally in support of the party.	Africa
[ February 20, 2020 ] Haragee Bahaatti Hiriirtota Deggersa Badhaadhinaa Mormiin Mudate Jedhama	Radio
[ February 20, 2020 ] Are we back to square one?The video shows that members of the military forces are beating and torturing the youth in Awaday,eastern Oromia!	Videos
[ February 20, 2020 ] The Rebels (OLF) charging for election	Africa
[ February 20, 2020 ] የኤረትራ መነግስት በኢትዮጵያ ጉዳይ እጁን ማስገባቱ የሀገር ሎዓላዊነት መደፈር ነበር አለመታደል ሆኖ ይህን የሚረዳ እና የሚያወገዝ መሪ ሀገሪቱ የላትም	Videos
[ February 20, 2020 ] Qeerroo Oromiyaa: Stand up against Military Junta/ Mengistu H/Mariam the II	News
[ February 20, 2020 ] The mystery sickness bringing death and dismay to eastern Ethiopia	Africa
HomeAfaan OromooNewsAdii Waaqoo Yuunversiitii Waldiyaatti reebamee ajjeefame!!
Adii Waaqoo Yuunversiitii Waldiyaatti reebamee ajjeefame. Kan reebe humna poolisii mooraa sanaati. Yuunversiitichi garuu akka waan inni dhukkubsatee du’eetti ibsa.
Lubbuu barattoota keenyaatti qoosamaa jira. Yuunivarsiitii Waldiyaatti eda halkan nafxanyootaan ajjeefame.
Lubbuun isaa haa jannatu. Maatii firoota isaatiif jajjabina hawwina.
የ3ኛ ዓመት ተማሪ የሆነው #Adi_Waaqoo
የወልደያ ዩኒቨርስት ተማሪ ነው ከአሁን በፊት ወልደያ ዩኒቨፈርስት በነበረው የተማሪዎች ግጭት ምክንያ ከሶስት ተማሪች ጋ በመ ሆኖ ህይወቱን ለማዳን ግቢውንብ ለቆ በመውጣት ላይ እያለ በአማራ ክልል ፖልሶች ተይዞ ተደብድቦ ከፍተኛ ጉዳት አድርሶውበት ሆስፒታል ገብቶ ነበረ::
ነገር ግን በደረሰበት ከፍተኛ ጉዳት ዛሬ ህይወቱ አልፏል::